नेप्सेको अन्यमा छ झण्डै २६ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत, बजार पुँजीकरण कुन कम्पनीको कती ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नेप्सेको अन्यमा छ झण्डै २६ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत, बजार पुँजीकरण कुन कम्पनीको कती ?
काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा रहेका उपसूचक मध्य अन्यमा ४ कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । यो समुहमा रहेका कम्पनीहरुको जम्मा चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख ७३ हजार २ सय रुपैँया रहेको छ ।
जम्मा २५ करोड ७८ लाख ९३ हजार ७ सय ३२ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको यो समुहमा रहेका कम्पनीको जम्मा बजार पुँजीकरण १ खर्ब ३८ अर्ब २८ करोड ९३ लाख ३८ हजार ९ सय ८९ रुपैँया रहेको छ ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १ सय रुपैँया अंकित दरका १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत रहेको छ । पछिल्लो कारोबारमा ७ सय ३० रुपैँया प्रतिकित्तामा सेयर खरिद बिक्री भएको कम्पनीको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैँया रहेको छ ।
यस्तै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको १ सय रुपैँया अंकित दरका १० करोड कित्ता सेयर सूचीकृत रहेको छ । पछिल्लो कारोबारमा १ सय ५६ रुपैँया प्रतिकित्तामा सेयर खरिद बिक्री भएको कम्पनीको बजार पुँजीकरण १५ अर्ब ६० करोड रुपैँया रहेको छ ।
सेयरबजारमा पछिल्लो पटक ३ हजार ५० रुपैँयामा कारोबार भएको नागरिक लगानी कोषको बजार पुँजीकरण २२ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैँया रहेको छ । कोषको १ सय रुपैँया अंकित दरका ७४ लाख २ हजार ४ सय ४७ कित्ता सेयर सूचीकृत नेप्सेमा सूचीकृत छन् ।
अन्य समुहमा रहेको अर्को कम्पनी नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी हो । नेप्सेमा कम्पनीको १ सय रुपैँया अंकित दरका ४ लाख ९१ हजार २ सय ८५ कित्ता सेयर रहेका छन् । १ करोड ६८ लाख ७५ हजार ६ सय ३९ रुपैँया बजार पुँजीकरण रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख २८ हजार ५ सय रुपैँया रहेको छ । लामो समयदेखी यो कम्पनीको दास्रो बजारमा कारोबार भएको छैन ।
२०७४ फागुन २५ गते प्रकाशित ।